Ma runba in Lampard u badalanayo koox China Ka Dhisan? - iftineducation.com
iftineducation.com – Musimkan ayaa Chalsea soo iibsatay ciyaariyahano dayar, Frank Lampard oo ah cayaariyahan dhaxda ugu ciyaaro kooxda Chalsea oo ah nin qibrad weyn leh, ayaa kulamo badan lagu soo darin line up ka kooxda, ayaa waxaa lisla dhaxmaraayaa in Lampard u badalan doono kooxda Guizhou Renhe, ma run baa warkaas?
Bilowgii musim kaan ayaa Chalsea waxey iska dirtay ciyaariyahano ay ku taagneed sida Raul Meireles dan Salomon Kalou si ay jaanis u siiso ciyaariyahanada yar yar sida Oscar, Eden Hazard, iyo Juan Mata. Winger veteran kasoo jeeda Prancis, Florent Malouda xitaa waa laga saaray safka hore ee line up ka.
Arintaas ayaa waxey cadeyneysaa in Lampard uu ka tagi doono Chalsea, maxaa yeelay waxaa heshiis fiican lagalay kooxda Guizhou Renhe ee ka dhisan China, wada hadalkina u soo dhamaaday. wuxuuna heshiis kan Lampad ee Chalsea ku egyahay dhamaadka musimkaan.
Haa waan lagalnay heshiis Lampard laakiin wali wax lahubo mahan ayuu yiri Yang Xiaoyu. Kahor waxa lisla dhaxmaraayay in Lampad uu ku biiri doono Guizhou Renhe janaayo sanadka cusub lagana dhigi doono kaptenka kooxda.
Wali lama shaacin mushaarka uu qaadan doono Lampard, laakiin wararka laga helaayo saxaafada Tiongkok mushaarkiisa wuu ka badnaan doona mushaarka ay qaataan Nicolas Anelka iyo Didier Drogba, oo haddaba ka ciyaara ligaha Tiongkok. Hada labadoodaba waxey mushaar ahaan u qaataan USD $ 300 kun dollar ka mareykanka ah isbuucii.
W/Q: Adan yo